သက်ဝေ: အသည်း အသက်နဲ့ ထပ်တူ
Posted by သက်ဝေ at 5:20 AM
မိုးခါး November 5, 2012 at 5:44 PM
နှစ်ယောက်ကြားမှ စိတ်နာလောက်အောင် ဆက်ဆံရေးမဆိုးဝါးခဲ့ဘူးထင်တယ်နော် .. ဒါမှမဟုတ် ရှိခဲ့သည့်တိုင်အောင် အမျိုးသမီးဘက်က သဘောထားကြီးတာလား .. အဲ့ယောကျားကုသိုလ်ကံလည်းပါမယ်ပေါ့လေ .. :D
ဲမြသွေးနီ November 5, 2012 at 5:45 PM
မြသွေးတော့ ဖတ်အပြီးတွေးနေမိတာက ...
အသည်းတစ်ခုကို နှစ်ယောက်မျှဝေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက် ပြန်လည်သင့်မြတ်လက်တွဲကြလေမလား??..
အစ်မရယ်.. လူတစ်ယောက်ကို နားလည်ဖို့ဆိုတာ..အဲဒီလူရဲ့နေရာကို ရောက်ဖူးမှ ပိုသိနိုင်တယ်.။ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ တစ်ဖက်သတ်ကြီး တစ်ယောက်တည်းက ခွင့်လွှတ်... နားလည်နေလို့ မဖြစ်ဘူးလေ...။ သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ပိုင်ရှင် ကြင်နာတတ်တဲ့ အိမ်ထောင်ဘက်ကို ရထားသူအဖို့ ... မပြေလည်တဲ့ ဘ၀တွေကို သေချာ နားလည်နိုင်မယ် မထင်ပါဘူး။ ဘယ်သူမှ ကိုယ်တည်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်ထောင်ကို အလွယ်တကူ မပြိုကွဲချင်ကြပါဘူး..။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့် အရမ်းကို နာကြင်ရတယ်။ တော်ရုံတန်ရုံ စိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်ရုံနဲ့တော့ ဘယ်သူမှ ဒီလမ်းကိုရွေးမယ် မထင်ပါဘူး။ if Your were in their shoes....
ဂျစ်တူး ( မုံရွာ ) November 5, 2012 at 6:10 PM
အသဲ အသက်နဲ့ ထပ်တူတစ်ဦးကိုတစ်ဦးအပြန်အလှန် ပိုနားလည်တန်ဖိုးထားလာကြမယ်ပေါ့
T T Sweet November 5, 2012 at 6:37 PM
အမျိုးသမီးက အတော်ချစ်တယ်နဲ့တူတယ်။ ကွဲကွာဖို့ထိ ဘာတွေ ဖြစ်ဖူးတယ်မှ မသိရတာနော်။ အတူကြာရှည်စွာနေခဲ့ဖူးတဲ့ သံယျောဇဉ်ဆိုတာလဲ ရှိသေးတာကိုး။
ညီလင်းသစ် November 5, 2012 at 7:24 PM
ဟုတ်တယ်၊ ဝမ်းနည်းဝမ်းသာ ခံစားမှု နှစ်မျိုးရတဲ့ အဖြစ်အပျက် ပါပဲ၊ သေခြင်းတရားက ခင်ပွန်းဟောင်းကို တံခါးလောက်ခေါက်တဲ့အခါ သတ္တိရှိရှိ မိခင်စိတ်နဲ့ ပြုမှုခဲ့တာ လေးစားစရာပါ...။
သက်ဝေ November 5, 2012 at 8:02 PM
Anonymous သို့ ...
ခုလို နာကျင်စေဖို့လုံးဝ မရည်ရွယ်ပါဘူး... တနေ့ ကပဲ မိတ်ဆွေတယောက်ကို နှစ်သိမ့် ဖြောင်းဖြခဲ့ရတာမို့လောလောလတ်လတ် ခေါင်းထဲ ရောက်လာတဲ့ အကြောင်းအရာ တခု... သေသေချာချာ ညှိကြပါအုံးလို့နားချဖြစ်လိုက်တဲ့ အချိန်ပိုင်းလေးကိုသတိရလို့ရေးလိုက်မိတာပါ...
ကိုယ်ဟာ လူတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး နားလည်ပေးချင်သူ တယောက် စိတ်ချမ်းသာစေချင်သူ တယောက်သာ ဖြစ်ပါတယ်... ကိုယ့်ပိုစ့်ကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရတယ်ဆိုရင် တောင်းပန်ပါတယ်...
sosegado November 5, 2012 at 8:54 PM
စလုံးမှာ မင်းသားတစ်ယောက်က သူ့ဇနီးမင်းသမီးကို အသဲပေးဘူးပါတယ်၊ မိန်းမယောကျာင်္းမဆိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်
သက်ဝေ November 5, 2012 at 9:19 PM
ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်မ ဒီပိုစ့်ကို ရေးနေရင်းမှာပဲ သူတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းကို သတိရနေပါတယ် ထည့်ရေးဖို့ လည်း စဉ်းစားပါသေးတယ် ဒါပေမယ့် အဲဒီတုန်းက သူတို့ က စလုံးမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ မင်းသား မင်းသမီးတွေ ပြီးတော့ ချစ်သူတွေလေ... ပိန်ဆေးတွေ သောက်ပြီး အသဲပျက်သွားတဲ့ ချစ်သူ မင်းသမီးကို မင်းသားက အသဲပေးခဲ့တာ...
အခုက ကတောက်ကဆဖြစ်ပြီး ကွာရှင်းပြတ်စဲပြီး ဇနီး မောင်နှံ... အသဲ ပေးဖို့ အတွက် ပြန်လည် ပေါင်းစည်းကြတဲ့ အကြောင်းလေးမို့ရေးဖြစ်တာပါ... အဲဒီမိန်းမနေရာမှာ ယောက်ကျားဖြစ်နေခဲ့ရင် ကွာရှင်းပြီးသား ဇနီးတယောက်ကို အခုလို ပြန်ပြီး ကြင်နာနိုင်ပါအုံးမလားလို့တွေးမိတာလေးကို ရေးပြရုံပါ...
အခုလို စာလာဖတ်တာ မှတ်ချက်ရေးခဲ့တာ ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ် ကို Sosegado...
သက်ဝေ November 5, 2012 at 9:37 PM
ကိုယ်နဲ့အတူတူ လိုက်တွေးရင်း မှတ်ချက်ရေးပေးသွားကြတဲ့ မိုးခါး မြသွေး ဂျစ်တူး တီတီဆွိ နဲ့ကိုညီလင်းသစ်တို့ ကိုလည်း ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်...
ခင်မင်းဇော် November 5, 2012 at 11:59 PM
မရေးပေးခဲ့ရင်ရော ဟင် !!!
ညီရဲ November 6, 2012 at 12:25 AM
Su Dan ရဲ့ အချစ်မျိုးက ရှိတော့ရှိမယ်... ဒါပေမယ့် ရှားမယ်...
Vista November 6, 2012 at 2:59 PM
ကိုယ်ချစ်ခင်ဖူးတဲ့လူကို အလှုအနေနဲ့ ပေးတာလည်းနေမယ်၊ ပြန်ပေါင်းချင်မှတော့ပေါင်းကြမှာပါ။ ပေးချင်တိုင်းလည်း ပေးလို့ ရမှကိုး၊ ပေးလို့ ရရက်သားတော့ သေချင်သေဆိုမထားဘူးထင်ရဲ့ ။ မုန်းလို့ ခွဲခွာကြတာမဟုတ်ဘူးထင်တာပဲ။ သဘောထားမတိုက်ဆိုင်လို့ ကွဲကြတယ်ဆို ပြန်ပေါင်းဖို့ လည်း ခက်သားပဲ။ .. သူ့ အချစ်က မေတ္တာအရင်းခံလို့ နေမယ်။
မိုးငွေ့........ November 6, 2012 at 6:36 PM
ကိုယ်အသဲပေးလိုက်မှ အသက်ရှင်ရမယ်ဆိုရင် (ကိုယ်လည်း အသက်အန္တာရယ်မရှိဘူးဆိုရင်) .... ငါသာဆိုရင် လို့ တွေးနေတာ..အဟီး...။ ။
အန္တရယ်ကတော့ ရှိမှာပဲနော်... ICU ထဲေ နရတယ်ဆိုတော့......။
ပြန်ပေါင်းကြရင်ကောင်းမှာပဲ...။ မပေါင်းဖြစ်ရင် အသဲရတဲ့လူကတော့
အသဲ တစ်ခြမ်းကို လွမ်းဖို့ သိမ်းထားပါရစေဦး သီချင်းလေး ဆိုနေရတော့မှာပ....။
chocothazin November 7, 2012 at 2:14 PM
တစ်ချို့ကိစ္စတွေက မှန်တယ်၊ မှားတယ်လို့ ပြောလို့မရအောင် သိမ်မွေ့လွန်းပါတယ် အစ်မသက်ဝေရယ်။
Hmoo November 8, 2012 at 10:18 AM
အိမ့်ချမ်းမြေ့ November 8, 2012 at 12:25 PM
သမာရိုးကျ မဆန်တဲ့ ချစ်ခြင်းတစ်မျိုးပေလားကွယ်..
Thandar Lwin November 9, 2012 at 9:31 AM
အမ ရေ တင်တဲ့ နေ့ထဲက ဖတ်ဖြစ်ပါတယ် ။ ပို့စ် တင်မက ကွန်မန့် တွေပါ ဖတ်ခဲ့လို့ အကြောင်းအရာတစ်ခု အပေါ် အမြင်တွေ အမျိုးမျိုး ကွဲလဲ နိုင်တာကို သေချာ သဘောပေါက်သွားပါတယ် ။
ကိုယ့်သမီးရဲ့ အဖေကိုး မသက်ဝေ။ လူကြီးတွေသာ တယောက်ကို တယောက် မလိုအပ်တော့ဘူး ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ကလေးကတော့ သူ့အဖေကို လိုအပ်နေမှာပဲ မလား။
ယောကျာ်းကလည်း မိန်းမကို ပေးမယ် ထင်ပါတယ်။ အသည်း တစပေးတာ ကျောက်ကပ်တလုံး ပေးရတာမျိုးလည်း မဟုတ်ပြန်ဘူးလေ။
မသက်ဝေ အပေါ်က မအယ်ရေးတာ။